အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ဆီးဂိမ်းစ်ဆိုတဲ့ အာဆီယံ မွဲဆေးဖော်မယ့် စောက်တလွဲ ပြိုင်ပွဲကြီး
ဆီးဂိမ်းစ်ဆိုတဲ့ အာဆီယံ မွဲဆေးဖော်မယ့် စောက်တလွဲ ပြိုင်ပွဲကြီး
ဆီးဂိမ်းစ် အိမ်ရှင်လုပ်မယ်.. ဆိုတာကိုက စောက်တလွဲ ဖြစ်ခြင်းဘဲ ။
ကိုယ့်အိမ်မှာ စားဖို့တောင် အနိုင်နိုင်၊ ငပိရည်နဲ့ ကတက်ချဉ်တို့စားနေရချိန်မှာ အိမ်ဂရံပေါင်ပြီး ပရိုဘောက်စ်ဝယ်စီးတဲ့ ခပ်ပိန်းပိန်းခပ်ကြောင်ကြောင် အပေါ်ယံဟန်ပြသမားတွေရဲ့ လုပ်ရပ်လို့ဘဲ မြင်ပါတယ်။
ဖွတ်ကျောပြာစုတိုင်းပြည်အတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဘာညာသာရကာနေကြာကွာစိ .. လူထုဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍတွေကိုတော့ စောက်ဂရုမစိုက်ဘဲ တော်တော်ဖင်ယားချင်တဲ့ အစိုးရလို့ .. (တိုင်းပြည်ကို အခွန်ထမ်းထားသူတစ်ယောက်အနေဖြင့်) ပက်ပက်စက်စက် ဆဲချင်ပါတယ်။
၂ နှစ်တစ်ကြိမ် အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံ (+၁) က အလှည့်ကျ ကျင်းပ၊ အိမ်ရှင်လုပ်တဲ့တိုင်းပြည်က ရွှေတံဆိပ်တွေ သိမ်းကြုံးယူဖို့ အိမ်ရှင့်ရိုးရာအားကစားနည်းဆိုတာတွေ ပစ်ထဲ့ ။ ပြိုင်ပွဲရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာဟာလည်း ဘာမှမဟုတ်၊ ဘာစံချိန်မှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ချိုးမယ့်ဟာတွေ မရှိ၊ ၂ နှစ် တစ်ကြိမ် ပွဲရေအရမ်းစိတ်တော့ ရှိစုမဲ့စု ၁၀ နိုင်ငံထဲမှာ စားနိုင်သောက်နိုင်တိုင်းပြည်ဆိုတာကလည်း ထိုင်း၊ မလေး၊ အင်ဒို လောက်ပဲ ရှိ။ (စင်္ကာပူ လို တိုင်းပြည်မျိုးတောင် အမြတ်မထွက်ဘဲ အိပ်စိုက်ရမယ့် ဗြမ္ဗာကြီးဦးဂေါင်းမို့ .. ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေတာ) ကိုယ်တို့ မောင်သေးစိမ်က ဖင်ယားပြီး .. အိမ်ဦးခန်းထဲ “ဖွတ်” ခေါ် ထဲ့သလိုဖြစ်နေပါပြီ။ လာအို ဗီယက်နမ် ဘရူနိုင်း ဆိုတာလည်း ... သင်္ကြန်တွင်း ဒုလ္လဘမဲပေါက်လို့ အောင့်သီးအောင့်သက် ပဉ္စင်းတက်လိုက်ရသလို သဘောထားကြတာ ။
“ထုပ်ဆီးတိုး၊ ချောတိုင်တက် ၊ ပူစီပေါင်းဖင်ထိုင်ဖောက်၊ အပ်နဖားထိုး၊ အုန်းသီးလု၊ အာလူးကောက်၊ ခေါင်းအုံးရိုက် ၊ ဘုတ်တလုပ်တောက်တဲ့ ၊ မီကျောင်းရေကန်၊တီးပူ၊ ရှမ်းကိုးမီးးး” စတဲ့ အိုးလှံပစ်စံချိန်မီ ဗမာ့ရိုးရာအားကစားနည်းဒေ ထည့်သွင်းယှဉ်ပြိုင်ပီး ရှိသမျှရွှေတံဆိပ် သိမ်ါးကြုံးယူမယ် ကြံတာကြောင့် ဖဦးထုပ်က သပေါက်မှိတ်ပါပြီ .. ကြားရ။
နှစ်ပေါင်းးး ဘယ်နှဆယ်အတွင်း .... ကျွန်းဆွံယ်မီးရှုးတိုင်ကြီးး ဗမာပြည်ပြန်လာပါပြီ.. ဘာညာ ဘာညာ .. အော်နေသူများကိုလည်း အားနာပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ မှီတင်းနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေကိုတောင်မှ လုံခြုံမှုမပေးနိုင်တဲ့ကြား .. ဘယ်တိုင်းတပါးအားကစားသမားကို ဘယ်လို အာမခံမှု ပေးကြမှာလဲ ။ မလေး အင်ဒို ဘရုနိုင်း ကုလားးတွေချည်းဘဲ ။ ဘယ်လိုလဲ .. သူတို့ကိုကော .. မီးရှို့ကြဦးမှာလား ..။
ထိုင်း အသင်းကို “ယိုးဒယားးး” လို့ ခေါ် ၊ ဘောပွဲခင်းထဲ မဆီလေးရယ်မှ အိုမဆိုင် “ဘုရင့်နောင်” လက်ပိုက်နေတဲ့ ပိုစတာကြီးကိုင်လို့ .. ကုန်းဘောင်ခေတ်ဦး ဗမာစစ်သားဒီဇိုင်းဆင်ပြီး .. အားပေးဦးမှာလား။ (၂၀၀၃ ယူ ၁၈ ပွဲ ကြည့်ဖူးသူများသာ ) ယိုးးဒယား ရီးးဘဲ... ယိုးးဒယားးရီးဘဲ .. ဆိုပြီး ပလပ်စတစ်အိတ်ထဲ သေးပေါက်ထဲ့လို့ သေးထုပ်နဲ့ပေါက်ဦးမှာလား ဖိနပ် ငနီပျံ ဝဲ ဦးမှာလား။
ပလီမီးရှို့တဲ့စရိုက်ကော ယိုးဒယားမို့သေးထုပ်နဲ့ပေါက်တဲ့စရိုက်ကော တန်ဖိုးမဲ့တာချင်း တူတူဘဲ ။
ဒါမျိုးကို ဇာတိပုညဂုဏ်မာနဆိုပြီး ချီးဘရိန်းတံခွန်လွှင့်ထူကြဦးမယ့် .. ငပိန်းငထူ ငစနူများကို လာမယ့် ဆီးဂိမ်းစ်မှာ .. တွေ့ရပါဦးမယ်..ဆိုတာကတော့ .. မြေကြီးလက်နဲ့ပုပ် လွဲသွားဦးမယ်။ မောင်မား ၁၉ လမ်းထဲ အရက်မသောက်ဘဲ ပြန်ကောင်း ပြန်ခဲ့လိမ့်မယ်။
(ကြုံတုန်းး ဖောရယင် . အဲ့ဒီ ဆီးဂိမ်းစ်ဆိုတဲ့ အာဆီယံဖွတ်ကျောပြာစုတွေကို မွဲဆေးဖော်မယ့် စောက်တလွဲ ပြိုင်ပွဲကြီးကို ဖျတ်သိမ်းသင့်နေပါပြီ။ ၄ နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပတဲ့ အိုလံပစ်အဆင့်မီအာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာဘဲ .. အဆင့်ရှိရှိ ဝင်တိုးဖို့ လိုနေပါပြီ။ ခုထိ ကမ္ဘာ့အိုလံပစ်အထိ ပေါက်မြောက်ထားတဲ့ အာဆီယံအားကစားသမားဆ်ိုလို့ .. ၉၆ အတလန္တာပွဲတုန်းကထိုင်းဘောက်ဆင်သမားနဲ့ .. ဖဦးထုပ်ဘောက်ဆာရယ် မလေးအင်ဒို ကြက်တောင်သမားတချို့ဘဲ ကြားဖူးပါသေးတယ်။ ပြောရယင်.. လှေကွဲကြီးးကို ဆက်ခုတ်မနေပါနဲ့တော့ .. ရေထဲနှစ်လိုက်တာစိတ်ချမ်းသာပါတယ်)
ဟဲဟဲ ... လွန်တာရှိက ဝန္ဒာမိပါ ... လို့ ။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:41 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook